Akụkọ - companylọ ọrụ anyị mere nke ọma asambodo gbasara AUDITED SUPLIER na BSCI-AUDITED
Ná ngwụsị nke 2019, ụlọ ọrụ Shijiazhuang nke ụlọ ọrụ anyị na-eweta ndị ọrụ nyocha nke ụlọ ọrụ SGS Tianjin Branch, Ha mere nyocha na saịtị anyị na ụlọ ọrụ anyị, Nyochaa ọdịnaya na-ezo aka na ikikere azụmaahịa, akwụkwọ ndenye aha mbupụ azụmahịa, ego kwa afọ.
Nkwupụta, ohere ụlọ ọrụ, nhazi nzukọ ụlọ ọrụ, sistemụ njikwa na QC syeterm. Na mgbakwunye, ndị ahụ nwalekwara ngwaahịa anyị n'otu n'otu. Dị ka Uwe akpụkpọ anụ atụrụ, uwe atụrụ ajị atụrụ, okpu ajị atụrụ, akpụkpọ anụ atụrụ, akpụkpọ ụkwụ na ihe ndị ọzọ. Ma debe faịlụ maka mkpagha. ọma asambodo, ma na-SGS asambodo akụkọ emechaa.
N'otu oge, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta akwa atụrụ nke ụlọ ọrụ anyị tinyere na ya abụrụla ndị BSCI nyochara otu ugboro n'afọ. Mazi Benny Wang, onye isi njikwa ụlọ ọrụ ahụ, bịarutere ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji soro ndị ọrụ nyocha maka nyocha.
Ndị nyocha ahụ gbara ndị ọrụ ajụjụ ọnụ n'otu n'otu, ajụjụ ọnụ na-ezo aka na sistemụ ọrụ nchekwa sistemụ nchekwa, usoro ọzụzụ ndị ọrụ, usoro ụgwọ ọrụ ndị ọrụ, gburugburu ebe ọrụ na nsogbu ndị ọzọ, ma mee usoro nyocha na akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ. GN in na 2020 na-aga nke ọma asambodo, Ọ bụ ọkwa C.
Companylọ ọrụ anyị na-ekwusi ike na ịme asambodo abụọ a, Anyị chere na ọ bụ ọrụ anyị, ọrụ dịịrị ọha na eze.nakwa nkwa nke ndị ahịa anyị niile. Anyị ngwaahịa echiche bụ ịnọgide na-enwewanye mma, ọ bụghị naanị na ịchụso ịdị mfe & ịdị mma, dịkwa na nka ọfụma. Dị ka atụrụ lambskin atụrụ anyị. Site na isi mmalite, anyị na-eji.
Merino tankin na gburugburu ebe obibi anụ ọhịa, enweghị formaldehyde na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Ma ejiri nke ọma họrọ akụkụ nke ọ bụla nke atụrụ. .Anyị ga-eme ọ bụla zuru ezu well.We na-ekwusi na-eme nke ọma mgbe-sales ọrụ, Anyị na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na nwere ọ bụla nkwarụ uwe, Anyị ga-eme ka ọhụrụ maka gị free!
Ihe edeturu: N'ihi ihe nzuzo ahia, ọ bụ naanị akụkụ nke ọdịnaya ka egosiri. Biko jiri obiọma ghọta.